IPhone X oo ku dhexjira Jet Black midab ayaa la bilaabi lahaa | Wararka IPhone
Tijaabooyinka ay Apple ku sameyso wax soo saarkooda ayaa aad uga fog shaqooyinka uu qalabka laftiisa bixiyo. Sida aan wada ognahay, naqshadeynta ayaa fure u ah Apple tanna waxaa lagu muujiyey taariikhdeeda oo dhan runtii alaabooyin qurux badan markay tahay qaabeynta.
Dhowr maalmood ka hor warku wuxuu sii daayay taas Apple waxay maanka ku haysay inay bilawdo iPhone X-da madow ee biyaano, oo loo yaqaan 'Jet Black'. IPhone-kan ma ahan wax la yaab leh in la arko tan iyo markii ugu horreysay ee la bilaabay ay ahaayeen noocyada iPhone 7 ee dhammaadkan, naqshad qurux badan iyo midabbo loogu talagalay casriga Apple.
Hadda tusaalooyinka Apple ama fikradaha waxay ka soo if baxayaan koonto Twitter ah Noocyada 'iPhone X' ee leh dhammaystirka madow ee biyaano. Kani waa isticmaalaha iyaga faafiyay:
Waxay isku dayeen iPhone X Jet Black kahor pic.twitter.com/md5p9nNER3
Runtu waxay tahay inay runti u muuqdaan kuwo fiican oo waxaan fahamsanahay in tijaabooyinka nuucaan ah ay tahay inay kumanaan ku ahaadaan iPhone-ka iyo aaladaha kale ee Apple. Shirkaddu had iyo jeer waxay raadineysaa inay soo bandhigto naqshadaha ugu fiican uguna soo jiidashada badan, sidaa darteed midabkan biyaano ee biyaano wuxuu noqon lahaa ikhtiyaar aad u wanaagsan oo lagu daro bilowga iPhone X, iPhone ah oo beddeli lahaa sharciyada furitaanka iyo naqshadeynta iPhone-ka ee la arkay illaa maanta markii badhanka guriga lagala baxo.
IPhone-kani waxaa laga yaabaa in loo maleynayay inuu gadaal ka bilaabi doono ama ma noqon karo, tani maahan wax lagu dhaho soo daadashada qaabkan iPhone X ee aan ku aragno sawiradan iyo mararka qaarkood xitaa waan awoodnaa arag adigoon astaanta Apple dhabarka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone X » IPhone X oo ku dhex jira Jet Black midab ayaa la bilaabi lahaa